Resadresaka: Lehiben'ny komitin'ny tontolon'ny fizahan-tany momba ny fizahantany
Home » Interviews » Resadresaka: Lehiben'ny komitin'ny tontolon'ny fizahan-tany momba ny fizahantany
Septambra 16, 2017
Voatendry ho filohan'ny komity manerantany momba ny fitsipi-pitondran-tena momba ny fizahan-tany tamin'ny 2013, i Pascal Lamy dia nandray anjara lehibe tamin'ny fizotran'ny fivoriambe momba ny etika fizahan-tany any amin'ny UNWTO General Assembly. Eto izy dia nadinadinina tamin'ny fivorian'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany eran-tany (UNWTO) GA any Chengdu, Sina.
Q. Ny firoboroboan'ny sehatry ny fizahan-tany dia tokony hidika amin'ny andraikitra etika avo kokoa. Inona, araka ny hevitrao, no olana lehibe atrehin'io sehatra io amin'io lafiny io?
A. Tao anatin'izay folo taona lasa izay dia nitombo telo ny isan'ireo mpandeha ary nitombo 4% isan-taona ny sehatry ny fizahan-tany. Midika izany fa ilaina ny maka antoka fa ireo turista 1,235 tapitrisa mandeha ankehitriny dia tsy lasa olana 1,235. Ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanajana ny zon'olombelona - indrindra ireo vondron'olona mora tohina indrindra amin'ny fiarahamonina - ary ny fitandrovana ny harena ara-kolontsaina sy ny fomban-drazana, ary koa ny lova azo tsapain-tanana sy tsy azo tsapain-tanana, dia isan'ny fanambinay ankehitriny. Ireo koa no andry amin'ny Taona Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fampandrosoana, andry tokony hitarika ny fitomboan'ny tompon'andraikitra amin'ny sehatra am-polony taona ho avy.
Q. Inona ny fifanarahana momba ny fitsipi-pitondrantena momba ny fizahantany ary inona no fiantraikany antenainao hananany amin'io sehatra io?
A. Amin'izao fotoana izao dia manana kaody eran-tany momba ny fizahan-tany izahay, izay nalaina tamin'ny taona 1999, momba ny fampiroboroboana ny fizahan-tany amin'ny fomba mendrika sy maharitra. Natao ho an'ny mpandray anjara rehetra izany: governemanta, mpandraharaha fizahan-tany, sehatry ny hotely, mpiasa fizahan-tany ary mpandeha. Niasa tsara izy io, saingy tsapanay fa tokony hohamafisinay izany. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany dia tsy maintsy mandray ny fanoloran-tena iraisan'ny fizahantany ara-etika amin'ny lafiny iray lavitra isika, amin'ny alàlan'ny fanovana ny Fehezan-dalàna ho Fifanarahana mety. Angamba tsy ny firenena mpikambana rehetra ao amin'ny UNWTO no hanao sonia an'io, saingy manantena fanampiana maro izahay. Ny fitsipi-pitondrantena dia ho an'ny fanjakana mpikambana, mpandraharaha, indostria ary mpanjifa. Ny Fifanarahana, izay fifanarahana iraisampirenena mifamatotra ara-dalàna, dia tsy afaka manao sonia sy manamarina afa-tsy ny Fanjakana mpikambana. Vokatr'izany dia izy ireo no mila maka antoka fa tompon'andraikitra avokoa ireo mpisehatra amin'ny sehatra fizahan-tany misy azy ireo ary miara-miasa mba hametraka etika kokoa ny fizahantany. Ny fankatoavana ny Fifanarahana, dia zava-bita tsara indrindra amin'ny Taona Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fampandrosoana izay ankalazaintsika mandritra ny taona 2017.
P. Inona avy ireo andry manan-danja amin'ny Fifanarahana momba ny etika fizahan-tany?
A. Miorina amin'ny Fehezan-dalàna momba ny fizahantany manerantany ho an'ny fizahan-tany, ny fifanarahana dia manana fitsipiky ny fitsipi-pitondrantena izay mahafaoka ireo faritra lehibe amin'ny fampandrosoana matotra, izay mifanindry indrindra amin'ny fandaharam-potoanan'ny UN 2030.
• Fampandrosoana maharitra sy fiainana dia, fampiroboroboana ny kolontsaina eo an-toerana, fitantanana ny fako sy angovo, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny fifehezana ny fandotoana);
• Ny olana ara-tsosialy (fanalefahana ny fahantrana, ny kalitaon'ny fiainana, ny fiarovana ny zaza, ny fanomezana hery ny vehivavy, ny fidirana amin'ny fizahantany ho an'ny rehetra);
• Fampivoarana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana (fahafaha-miasa any an-toerana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, lamina fanjifana eo an-toerana, fanajana ny zon'ny vazimba teratany);
• Fanatsarana ny fifankahazoana eo amin'ny samy kolontsaina (fiantohana ny fanajana ireo fiarahamonina mampiantrano, fampahalalana mangarahara mangarahara); SY
• Raharaha momba ny asa (fotoana mitovy sy tsy fanavakavahana, fialan-tsasatra, fahalalahana miasa, fepetra asa, programa fampandrosoana ny asa).
P. Ahoana no nanomanana ny lahatsoratry ny Fifanarahana?
A. Fotoana fohy taorian'ny fivorian'ny UNWTO General 2015, tapaka fa ny Code of Ethics dia tsy maintsy havadika ho fivoriambe iraisam-pirenena. Nangatahana ny Sekretariatin'ny UNWTO hanomboka ny fanomanana izany ary nisy vondrona niasa nanangana ny fivoriambe. Ny fanjakana mpikambana ao amin'ny UNWTO dia nasaina ho anisan'ny Vondrona miasa. Amin'ny maha-filohan'ny komity manerantany momba ny etika fizahan-tany dia nandray anjara tamin'ny fivoriana rehetra nataon'ity vondrona miasa ity aho.